Ahoana ny fanaovana Margin Trading (miaraka amin'ny LEVA) amin'ny Binance? - Cazoo
Home » Home » Ahoana ny fanaovana Margin Trading (miaraka amin'ny LEVA) amin'ny Binance?
tenifototra: Binance, fanoitra, Margin Trading
Inona ny margin trading, inona no dikan'ny fanaovana varotra sisin-tany amin'ny Binance? Voalohany indrindra dia mila manokatra portfolio varotra sisin-tany ianao amin'izay alefanao, mazava tsara, ny sisiny ary koa tsy maintsy mandeha ianao maka indram-bola isan- miasa ao Mila, mandeha lava na mandeha fohy, avy eo mividy satria resy lahatra isika fa hiakatra ny vidiny, na hivarotra satria resy lahatra izahay fa hihena io.
Hevitra voalohany: tsy misy maniry trosa, ary ity teknika ity dia manery anao hindrana indram-bola izay tsy maintsy aloanao amin'ny zana-bola.
Teboka faharoa: avo lenta tokoa ny haavon'ny risika. Manoratra ireto fanamarihana ireto aho mba hitadidy ny dingana sy ny teknika, saingy ireo mpivarotra efa za-draharaha ihany no tokony hampiasa an'io karazana fandidiana io.
Ho avy tsy ho ela.
Lahatsoratra manarakaBinance Coin (BNB): Ny mariky ny fifanakalozana crypto lehibe indrindra manerantany